रक्तचाप बारे नपाल्नुहोस यी ५ भ्रम, हुन सक्छ खतरा ! | रक्तचाप बारे नपाल्नुहोस यी ५ भ्रम, हुन सक्छ खतरा ! |
रक्तचाप बारे नपाल्नुहोस यी ५ भ्रम, हुन सक्छ खतरा !
काठमाडौँ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न रक्तचाप ठीक राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ । रक्तचापमा अस्थिरताले शरीरमा परिवर्तनहरू देखाउँदछ। दुबै वृद्धि र रक्तचाप कम हानिकारक हुन सक्छ। रक्तचाप बढेकोले हृदय रोगहरूको जोखिम बढाउँदछ । साथै कम रक्तचापको कारण चक्कर आउन थाल्छ।
रक्तचाप बारे धेरै प्रकारका भ्रमहरु छन् र ज्ञानको अभावका कारण मानिसहरू रक्तचाप ठीक राख्न उचित कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् ।
थाहा पाउनुहोस कि, मानिसहरूले रक्तचापको बारेमा सामान्यतया के कस्ता गलत धारणा राखेका छन, जुन अत्यधिक खतरा हुन सक्छ।
रक्तचाप उतार चढावले कुनै हानी गर्दैन
धेरै मानिसहरू रक्तचापको उतार चढावहरूलाई बेवास्ता गर्छन्। उच्च रक्तचापले स्वास्थ्यको बारेमा केही गम्भीर संकेतहरू पनि दिन्छ । कम रक्तचापका कारण शरीरले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्षम हुँदैन । रक्तचाप नियमित रूपमा जाँच गर्नु आवश्यक छ। यदि तपाईंको रक्तचापमा बारम्बार उतार चढाव आउँछ भने आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उपचार गराउनुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस् ... के हो खतरा रोगबाट मुक्ती दिलाउने कालो लसुन ?
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिदैन
धेरै व्यक्तिहरु उच्च रक्तचाप बारे मान्छन र विश्वास गर्छन् कि यसको उपचार गर्न सकिदैन। उच्च रक्तचाप स्वास्थ्यकर आहार, सही जीवनशैली र औषधिहरू मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उच्च रक्तचाप दैनिक व्यायाम, तौल ठीक राखेर, स्वस्थ आहार, कुनै तनाव र धूम्रपान छोडेर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... उपत्यकामा निषेधाज्ञा अवधि थप गर्न आग्रह
नुन कम गर्नाले उच्च रक्तचाप सुधार गर्न सक्छ।
अधिक नुन दुबै रक्तचाप र मिर्गौलाको लागि खराब छ। रक्तचाप नुनलाई घटाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि नुन कम गर्नाले उच्च रक्तचाप कम हुन्छ भने यो गलत छ। रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सही जीवनशैली हुनु पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
रक्तचाप नियन्त्रण भएपछि उपचार छोड्नु
मानिसहरूले सामान्यतया उच्च वा कम रक्तचापको समस्या नियन्त्रण गरे पछि यसको उपचार गर्न बन्द गर्छन्, जुन गलत हो। तपाइँको औषधि जारी राख्नुहोस् जब सम्म तपाइँको डाक्टरले सल्लाह दिदैन।
यो पनि पढ्नुहोस् ... अपर्याप्त भेन्टिलेटर र आइसियूले चितवनमा समस्या
कफी पिएमा रक्तचाप ठीक हुन्छ रक्तचाप
सामान्यतया, मानिसहरूलाई रक्तचाप कम हुँदाँ कफी पिएमा रक्तचाप ठीक हुन्छ भन्ने भ्रम छ । कफीमा फेला परेको क्याफिनले केही समयको लागि मात्र अवस्था नियन्त्रण गर्न सक्दछ किनकि यो रक्तचापको लागि उपचार होईन। क्याफिनको अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्यको लागि अझ हानिकारक हुन सक्छ। यदि तपाईलाई उच्च रक्तचाप छ भने तपाईले क्याफिन खानु हुँदैन।